Akapfuma kwazvo maguta muAmerica: Sei tarisiro yehupenyu inosiyana nezip kodhi - Nhau, Wellness | Chikunguru 2021
Kambani Nharaunda, Kambani Dzidzo Yehutano Wellness Hutano Dzidzo, Zvipfuwo Nharaunda Nhau, Wellness Nhau Nharaunda, Wellness Zvipfuwo Zvinodhaka Vs. Shamwari Kambani, Info Info Kambani, Nhau Checkout Zvinodhaka Info
Kuru >> Nhau, Wellness >> Ona chii chinoita kuti aya maguta gumi ave ane hutano muAmerica- uye nemabatiro aungaitezve pese paunenge uri
Ona chii chinoita kuti aya maguta gumi ave ane hutano muAmerica- uye nemabatiro aungaitezve pese paunenge uri
Kwamunogara kunogona kutaura zvakawanda nezve hutano hwako uye mararamiro. Mune mamwe mazwi, kungoziva kwekumba zip code inogona kupa nzwisiso yehuwandu hwehuwandu hwevanhu kugara zvakanaka. Asi izvi hazvireve kuti iwe unofanirwa kurega nzvimbo yako yekutarisa pane hutano (kana kushomeka kwayo) kukanganisa kwako.
Kunyangwe nharaunda yakagadzirirwa kupa mukana wekufambisa kuruzhinji, chikafu chine hutano, dzimba dzakachengeteka, nenzvimbo dzeveruzhinji dzinokurudzira hutano zvinogona kukanganisa hutano, sekureva U.S. Centers for Disease Kudzora nekudzivirira (CDC). Semuenzaniso, kana uchigara padhuze nebasa kana chikoro, ungangodaro uchifamba ipapo. Kana, kana paine mapaki padyo padyo, unogona kunge uchishingaapo.
chii chinonzi zita rakajairika realprazolam
Parutivi rweflip, panharaunda yako hazviiti kukoshesa zvinhu izvi, zvinogona kukanganisa muviri wako. Kungogara padhuze nemugwagwa mukuru kure nenzvimbo dzakasvibirira kunogona kureva mweya wakaderera - izvo zvinobatsira kumatambudziko ehutano senge asthma kana chirwere chemwoyo. Kusimba panyama uye njodzi yechirwere chisingaperi chinokanganisa kuti uchararama kwenguva yakareba sei, kana tarisiro yeupenyu hwako. Kana nharaunda iwe yaunogara isingakoshese hutano hwako, izvo zvinogona kupfupisa hupenyu hwako - asi hazvidi kudaro.
RELATED: Nyika yako ine hutano hwakadii?
Akapfuma kwazvo maguta muAmerica
Wallethub vakaongorora kuti nzvimbo inokanganisa sei hutano nekuongorora kuti ndedzipi nzvimbo dzinosimudzira hutano- nekupa mukana wekuwana chikafu chine hutano, kutarisirwa kwemutengo wakaderera, kana nzvimbo dzekutandarira dzakachengetedzwa zvakanaka. Aya ndiwo epamusoro gumi ane hutano maguta eU.S., sekutsvaga kwavo:
Asina hutano maguta muAmerica
Hunhu hwemaguta ane hutano hwakaderera zvakapesana nemaguta akave akadzika pane akanyorwa.
Zviitiko zvehutano nekodhi kodhi
Maguta ane hutano muWallethub ongororo ane zvimwe zvinhu zvakafanana: mutengo wehupenyu, nzvimbo dzekurovedza muviri, kuwana chikafu chine hutano, uye kurapwa kwakaderera mutengo. Neimwe nzira, nzvimbo dzisina hutano dzakada kuva nehurombo hwakakwira, kushomeka kwenzvimbo dzekurovedza muviri uye chikafu chine hutano, uye zvimwe zvipingaidzo kuhutano. Hezvino zvinhu zvinosarudzira guta rine hutano maringe neisina hutano.
Nzvimbo dzisinganyanyi kudhura dzinowanzove nezvinhu - kana kushomeka kwazvo — izvo zvinopa hutano husina kunaka. Zvinoreva, dhizaini yenzvimbo yakabatana nemari (marii yaunokwanisa kubhadhara kubhadhara dzimba), uye mutengo wehupenyu (mari inosanganisirwa nekugara mune imwe nharaunda nekuwana hutano ipapo).
Sezvineiwo, ese ari pamusoro emadhorobha akakwira mutengo-we - nzvimbo dzekugara. Semuenzaniso, munzvimbo yeNhamba 1 iri muSan Francisco, uko avhareji mutengo weimwe imba yekurara iri $ 3,629. 9% chete yevagari vanoonekwa sevanotambira mari shoma, uye mari yepakati pemhuri iri $ 87,701, iyo iri pamusoro, tichifunga huwandu hwakawanda hwevasina pekugara.
Maguta ari pasi pechinyorwa - ayo anofungidzirwa seasina hutano zvakanyanya - ane mitengo yakaderera zvikuru yekurarama. Semuenzaniso, Detroit iri zana nemakumi manomwe nenomwe pane runyorwa rwemaguta zana nemakumi manomwe nemashanu. Ivhareji mutengo weimwe-yekurara imba muDetroit ndeye $ 1,100, uye 33.4% yevagari vavo vari kurarama muhurombo.
Iyo Global Wellness Institute inotsanangura hutano sekutsvaga kwekuita zviitiko, sarudzo, uye mararamiro anotungamira kune hutano hwakakwana. Kutsvaga kwehutano kunogona kuomeswa nezvinhu zvinosanganisira zvakatipoteredza kana zvipingaidzo zvepanyika (kufunga-kwakanyanya mamiriro ekunze kana mhosva), mutengo, kushorwa kwevanhu, uye zvipingamupinyi zvenguva. Kana, inogona kubatsirwa nenzvimbo dzakasiyana kuti dzishande. Iwo ane hutano maguta anopa kumwe kwanyanya kuwana nzvimbo dzekurovedza muviri. Maguta asina hutano ane pakati pezvishoma.
Nevagari vane nyore kuwana 16 nzvimbo dzekusimbisa paira maira hazvishamise kuti San Francisco iri pamusoro pechinyorwa. Chidzidzo chemakore mashanu yakaratidza kuti 21% kusvika 23% yeCalifornians vanoita kurovedza muviri zuva rega rega, iro rakakwirira kupfuura nyika zhinji, nepo Mississippi manhamba achiratidza izvozvo 32% yevagari vehurumende havachashandi.
Chidzidzo chimwe chete ichocho chinobatanidza kurovedza muviri kusvika padanho rako remari, zvichiratidza kuwedzera nedzidzo yako, (iyo inowanzo kutungamira kumari yepamusoro). Izvi zvinobatsira kutsanangura kuti nei aya maguta ane mutengo wakakwira wekurarama ari nyore kutsvaga hutano hwakanaka.
Ichi chinhu chinoumbwa nenzvimbo inofamba, greenspace, uye nemhepo mhando. Kusvibiswa kwemhepo uye ruzha kunowanzove kwakadzama mumaguta makuru, asi kuwedzerwa kwenzvimbo yakasvibirira kunonzi kune maitiro akanaka. A 2019 kudzidza yakaratidza kuti kuwana nzvimbo yakasvibira, kunyangwe kungoiona, kunoderedza kushushikana kwemuviri, chinova chinhu chikuru mune dzakawanda cardiometabolic. hutano zvinonetsa. Chiitiko che multisensory chekuve mupaki ine huswa chakanakira kusimudzira pfungwa yekugara zvakanaka uye kukurudzira kufamba.
Maguta mashanu epamusoro akaverengerwa pamusoro gumi pamusoro pegreen space, nenzira kwayo, nekuti vese vanopa nzira dzekufamba-famba, nzira dzemabhasikoro, kuona kwekumberi kwemvura nekufamba, uye kuchengetedza mapaki. Icho chaicho pazasi pechinyorwa, Brownsville, Texas iguta remuganhu rine underdeveloped mvura yekumberi, nzvimbo inowanzo kupa nzira dzekufamba, greenspace uye kutandara. Nzvimbo yakavandudzwa yemvura inotungamidza kuedza kwekusimudzira. Neraki kuvagari, iro guta riri kuita chirongwa chakakura chekumutsiridza .
Kuwanika kune chikafu chine hutano
Zvakanyanya kuoma kudya zvine hutano kana iwe usingawane zvekudya zvakasiyana munharaunda yako, kana chekufambisa chakavimbika kuenda kuti utore. Maguta mazhinji ane magwenga ezvekudya-nzvimbo dzinonetsa kutenga chikafu chine hutano, chinodhura- izvo zvinowanzoitika kwaunowana mhuri dzinotambira mari shoma, asi mamwe akagadzira zvirongwa zvekuvhara mukaha. Semuyenzaniso, San Francisco's Chikafu Chekuchengetedza Task Force yaita basa rayo rekuona kuti mhuri dzinotambira mari shoma kana idzo dziri mumarenje echikafu dzinowana mukana wesarudzo. Maguta ane mutengo wakakwira wekurarama anowanzo kuve nehurongwa huri nani kugadzirisa kusagadzikana kwechikafu kune ruzhinji rwevanhu, nerubatsiro rwemaitirwo akanaka ekufambisa, nzvimbo dzekudya, uye mimwe misika yezvokudya.
Jen Tang, MD, anodzidzira basa muLawrenceville, New Jersey akamboshanda munzvimbo dzepamusoro dzepakati, ipapo nzvimbo dzine hurombo kwehafu yeawa chete, uye aona kuti zip code yako ingashandure sei kuwana kwako. Zviri nyore kwazvo kuona muhofisi mako [varwere vari] vasingatore mishonga yavo kana kudya chikafu chandakaraira, anotsanangura. Isu tese tine mhosva yekuita izvozvo, asi nevarwere vazhinji, zviri nyore kukoshesa nyaya dzakaomarara dzezvinogona kupinda munzira yavo. Chimwe chinhu chikuru chevarwere vake chaive chekufambisa. Pasina mota kana kuwana bhazi rakavimbika kana nzira yechitima, varwere vanonetseka kusangana nezvinodiwa.
Kana chekufambisa iri nyaya, kurerukirwa kunoiswa pamberi. Kune mumwe munhu ari kunetseka nekuchengetedza chikafu munharaunda yekumaruwa, chikafu chitsva chinogona kunge chiri kure kure. Pasina mota kana inowirirana bhazi nzira, gasi chiteshi chiri nyore chitoro inogona kunge iri yega sarudzo yekutenga. Dzimwe nguva zvitoro zvidiki izvi zvinotengesa zvinhu zvavo nemutengo wepamusoro. Vanogona kusapa chibereko chitsva, uye pachinzvimbo vanopa yakanyanya kugadzirwa, shuga yakakwira, yakakwira sodium zvinhu zvakaputirwa. Mhuri dzinogara munzvimbo idzi dzinowanzove dzakanyanya kufutisa, nekuti chikafu chisina hutano ndicho chete chikafu chiripo. Mari yakaderera yenzvimbo dzekugara hadziwanzo kuve nerubatsiro runowanikwa kumhuri dzisingakwanise kutenga chikafu chine hutano. MuDetroit, semuenzaniso, 48% yevagari vanoonekwa sevanoshaya chekudya, uye makumi matatu vasina mukana wekuzara-line grocer.
Haisi tsaona kuti vagari vemumaguta asina hutano vanotarisana nezvipingaidzo kuhutano hwakanaka. Mutengo chinhu chakakosha munzvimbo zhinji, nenzvimbo zhinji pazasi mumatunhu asina kutora chikamu mu Kuwedzera kweMedicaid , iyo yaizodzora mutengo wekuchengeta vanhu vane mari yepasi. Kuva asina inishuwarenzi kana kusimbisirwa kunogona kukanganisa zvakananga kugona kwemunhu kuve nekupindira kwekutanga kune akakomba mamiriro akadai seshuga uye neBP, izvo zvakasungirirwa kufutisa.
RELATED: Izvo zvaunoda kuti uzive nezve gore rino reMedicaid shanduko
Hupenyu hunotarisirwa ne zip code
Zvinoenderana ne Robert Wood Johnson Foundation , ekumusoro ane hutano maguta anozvirumbidzawo akanakisa ehupenyu tarisiro. MuSan Francisco, avhareji tarisiro yeupenyu ndeye 85, iri pamusoro pevhareji yenyika. Gulfport, Mississippi inova imwe yemastro asina hutano munyika, ine tarisiro yeupenyu kungori makore 75.19 chete.
Nharaunda yako inomira sei? Pinda zip code yako pano kuona kuti tarisiro yeupenyu yenzvimbo yako inokwikwidzana sei neavhareji yenyika. Enzanisa izvo nerondedzero yeWallethub, iyo inokwana 175 emaguta epamusoro muUnited States.
RELATED: Mushonga unonyanya kuzivikanwa mune dzese dunhu
Matanho ekuvandudza hutano hwako - zvisinei nekwaunogara
Hazvina mhosva kuti guta rako riripi pane rondedzero, heano matanho mashanu aunotora kuti utore mararamiro ane hutano.
Verenga bhajeti rako revhiki nevhiki rekutengesa usati waenda kuchitoro. Tsvaga yekutengesa muchitoro uye coupon kuti ubatsire kudzikisa mutengo wechinhu chero chipi chinodhura zvinhu.
Gadzira menyu yemhuri yevhiki . Zvisinei nekwaunogara, kuronga zvekudya zvako pamberi zvinogona kukuchengetera nguva, mari, uye zvichikubatsira iwe kuchengetedza chikafu chine hutano, anodaro Jaime Coffino , Ph.D., MPH, chiremba wezvepfungwa muNew York City.
Nyora pasi usati watenga zvekutengesa — uye omerera pairi . Nenzira iyoyo hausi kuyedzwa kuti utenge zvekuwedzera zvekudya (izvo zvakanaka kune hutano hwako, uye chikwama chako). Kusarudza sarudzo dzekudya zvine hutano kunogona kunetsa kana iwe wakakomberedzwa nekuwanda kwezvikafu zvisina hutano, Coffino anodaro. Kana iwe uchinzwa senge iwe unogara uchiedzwa nenzvimbo yako yechikafu, zvinogona kubatsira kuseta zvakanangana uye zvinogoneka zvinangwa zvine chekuita nehutano hwako kuti uzvibate wega.
Sarudza kana iwe uchikodzera kugamuchira mabhenefiti kubva kuhurumende kuburikidza ne Supplemental Nutrition Rubatsiro Chirongwa (SNAP). Ichi chirongwa chinogona kubatsira kukupa iwe nerubatsiro rwemari kutenga grocery. Seimwe bhenefiti yakawedzerwa, 90% yevadzidzi veSNAP vava kubvumidzwa kushandisa mabhenefiti avo kutenga zvigadzirwa online.
Exercise kumba. Izvo zvinokwanisika kuti uwane chiitiko chemuviri uine chete internet yekubatanidza - hapana zvemhando yepamusoro zvishandiso kana ejimini nhengo inodiwa. Kushanda chaiko kuri kuwedzera kuwanda panguva ye COVID-19 denda, uye mazhinji anogona kubva kuimba yako yekutandarira, usina greenspace kana jimu. Kune akawanda emahara ekushandira anowanikwa pamhepo anogona kukubatsira kuti ugare wakashanda. Ingova nechokwadi chekusarudza chiitiko chaunofarira uye nekutsvaga emahara makirasi anowanikwa online.
RELATED: 15 anokurumidza matipi ekugara akasimba uye ane hutano
zvinotora nguva yakareba sei glipizide kudzikisa shuga yeropa
Nekutenga zvine hungwaru uye kumba-kurovedza muviri, maAmerican anogona kubatsira kusimudzira hupenyu hwavo pachavo kunyangwe guta ravo risina mamiriro akakodzera ehupenyu hune hutano.
Dzidza njodzi dzekupindwa muropa nechikosoro
chii chekunyudza tsoka mukati nzwara chakuvhe
kurapa kwechisikigo kwehutachiona hutachiona muvana vadiki
kurapa mbiriso hutachiona muvarume
yakawanda zvakadii furuu yakapfura walgreens
maitiro ekurwisa nhema manyepo bvunzo yemushonga
imarii inonyorwa yeadderall mari